छोरी सुरक्षित रहेनन्
यो बर्षका निकै चर्चित समाचार अनुसार रुपन्देहीको दुईवटा फरक फरक घटना घटे दुबैमा पिडीत महिला नै हुन् पिडक पुरूष । एउटा घटना दुई युवतीलाई सांझ सात बजेतिर नाता खान भन्दै चिनेको एक पुरूषले रेष्टुरेन्टमा बोलाउँछ, नौ बजेसम्म बसेर घर पुर्याईदिन मोटरसाइकलमा बसालेर केही पर पु¥याए पछी मोटरसाइकल रोकेर केही कुरा गर्नुछ भन्छ अनि युवतीमाथी बलात्कारको प्रयास गर्छ । युवती चिच्याएपछी नजिकै गाउँबाट लाठी लिएर १०–१२ जनाको युवा जत्था आउँछ जसमध्ये कोही कर्मचारी पनि थिए । त्यसपछी उनीहरूको पालैपालो बलात्कार हुन्छ । अन्त्यमा भनिस् भने जे पनि हुनसक्छ ।
त्यसैगरी अर्को घटनामा युवायुवती प्रेममा पर्छन् । उनीहरू एक अर्कालाई छोड्न चाहँदैनन् । बिवाहको कुरा चले पछी केटी चाँही केटाभन्दा तल्लो जातकी र गरीब भएको कारण हत्या गरीन्छ । हत्या गर्ने प्रेमी भनाउँदोअसिरूद्धिन मुसलमान र नीजको परीवार हो । मृतक शवनमको जात र धनसंग जोखिदा वजन पुगेन । फलतः मर्न बाध्य बनिन् ।
सप्तरी सिराहामा लगभग शृंखलाबद्ध बुहारीहरु मारीए जसको मूल कारण दाइजो थियो । बिहेमा दिएको दाइजो कम भय पछी दिनानुदिन दाइजोको माँग बढाउने दिन सकेनन् भने मट्टीतेलमा दन्काउने, घाँटी थिच्ने, पंखामा झुण्ड्याउने, अति कठोर मानसिक यातना दिएर आफै बिष सेवन गर्न बाध्य पार्ने र बुहारीबाट छुट्कारा पाउने नियती नै बनेको छ । जतिपनि हत्या हुन्छ आफन्तबाटै, स्वयं लोग्नेबाटै हुन्छ । फेरी बिरगन्जको छप्कैयामा छिमेकी केटाले १५ बर्षिया बालिकामाथि एसिड प्रहार गर्यो । ए बाबा अब छोरीले बाहिर निस्कनै नपाउने
हो ? यी पापीले कहिले बुझ्ने हो की हाम्रा पनि छोरी बैनी छन् भन्ने कुरा । यस्ता अपराधीलाई सिधै फाँसीको सजायं नतोकेसम्म अपराध गर्न छोड्ने छैनन् ।
बलात्कारको बिषयमा त झन् भयावह अवस्था छ ।जन्मदिने बाबुले छोरी समेत छोडेको छैन, हजुरबाऊले नातिनी छोडेको छैन । दाजुले बहिनी छोडेको छैन, मामाले भान्जी छोडेको छैन, शिक्षकले बिद्यार्थी छोडेको छैन, छिमेकीले छिमेकी बच्ची छोडेको छैन, प्रहरीले युवती छोडेको छैन, हुँदाहुँदा गाडीका चालक, सहचालक मिलेर गाडीभित्रै युवती जबरजस्ती गरेका घटना दैनिकी जस्ता भैसके ।
आखिर यतिका अत्याचारको सामना किन गर्नुपर्छ छोरीले ?
हाम्रो समाजले छोरीलाई छोरा बराबरको दर्जा कहिले दिएन । छोरी गर्भदेखि नै असुरक्षित छन् । जब गर्भमा हुन्छे तब भ्रुण परीक्षण गरी छोरी देखिएमा तुरुन्त भ्रुण हत्या गरीन्छ । यस धर्तीमा आउने अधिकारबाटै बन्चित गरीन्छ । यसरी भ्रूण हत्या गर्दा न त डाक्टरले, न त परीवारले,न त बाबुले, न त स्वयं आमाले नै अपराध महसुस गर्छन् । भ्रुण हत्या डाक्टरको लागि कमाउने भांडो,परीवारलाई बोझ हल्का हुनु,बाबुको समस्या समाधान हुनु र आमालाई आफूले भोगेका दुःख कष्ट र माथि उल्लेखित घटनाहरूबाट बचाउने सुरक्षित अबतरण हो ।
गर्भमा हुँदा भ्रुण हत्या, जन्मन्छे बा दाजुभाई अनि सामाजिक मर्यादाको जंजीरले कसिन्छ । जब यौवन अवस्थामा पुग्छे प्रेमी तथा पति सासुससुरा र फेरी अर्को नयाँ सामाजिक दायराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उ स्वतन्त्र बाँच्न कहिले पाउने ? आफूखुशी प्रेम गर्नु पाप मानिन्छ भने बिहे त महापाप ठानिन्छ । जुनसुकै परिवेशमा पनि पुरूषको बराबर निर्णय गर्न छुट छैन भने समाजमा घट्ने घटनाको धेरै भागको सजाय निर्दोष हुँदाहुँदै पनि महिलाले नै बेहोर्नु परेको अवस्था छ । प्रेम गरोस् प्रेमीले उसँग यौन प्यास मेटाएपछी बिभिन्न बहानामा चरीत्रहत्या गरी मर्न बाध्य बनाउँछ । बिहे गरोस् दाइजो नामको भौतिक साधनसँग तुलना गर्दै मोलमोलाई हुन्छ । यदी मोल मिलेन भने उसले प्राण आहुती दिनु पर्छ । त्यतिबेला छोरी सुन, काठका सामग्रीसँग तुलना हुन्छे, कस्तो बिडम्वना ? के छोरी पाल्दा र छोरा पाल्दा फरक परीश्रम लाग्छ र ? छोरीको मूल्य कम छोराको बढी हुने ? बिहे गरेर पराईघर जाँदा बुहारीले दाइजोमा के ल्याई भनेर नियाल्ने समाजका मनुष्यहरू जन्मघरमा के के छोडेर आई कसैले नियाल्छ ?
फेरी अर्को भयावह घटना घट्यो रौतहटमा एउटा अपराधी बाबुले छोरीलाई बिमा रकम पाउने लोभमा चार बर्षिया छोरी लक्ष्मीको घाँटी च्यापेर हत्या गर्यो । यस घटनाले के दर्शाउँछ भने छोरी पैसा कमाउने साधन हो मरेर होस् या जिउँदो होस् । छोरी दोस्रो दर्जाको बस्तु हो ? यदी छोरा हुन्थ्यो भने बाउले माथ्र्यो होला ? छोराको पालनपोषण खर्च, पढाई खर्च सबै लगानी त उ जवान भय पछी बिहेमा तोकेर अर्को घरकी छोरीबाट अशुल हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेरै छोरो स्याहार गर्ने थियो ।
आज हामी कुन मानसिकता बोकेर गौरवान्वित छौं ? हामी नै अनभिज्ञ छौं, आरक्षणका कोटा पाएर मक्ख ! आरक्षणबाट माथिल्लो ओहोदामा पुगेकाहरूले पूर्ण रूपमा महिला मुक्त देख्नुहुन्छ कि क्या हो ? महिला मुक्ती र अधिकारका बिषय उठान गर्नुपर्दैन उहाँहरूले ? अनि महिला संगठनहरूको काम कर्तब्य र अधिकार के हो ? के सबै महिलालाई सांगठनिक गर्न सकिएको छ ? एनजिओ, आइ एनजिओको काम के हो ? यिनीहरूले पर्याप्त मात्रामा महिला शसक्तीकरणका काम गरेका छन् त?
सबै तह र तप्काका मान्छे,सामाजिक अभियन्ता,महिलावादी संगठन, एनजिओ आइएनजिओ छाउगोठ भत्काउँदैमा महिला शसक्तीकरण हुदैन । समस्या खडा गरेर डलरको खेती छोडेर टड्कारो रूपमा समग्र महिलाको हितमा काम गर । जनचेतना फैलाउँ । उनलाई तिमी पनि मानिस हौ भन्ने आभाष गराऔं । आर्थिक र सामाजिकीकरणमा पोख्त बनाउँ । ताकी घरघरमा छोरीमाथि गर्व.गरियोस् ।
अबको बेला भनेको भ्रुण परीक्षण गरेर छोरी हत्या होइन गर्वसाथ छोरी स्वीकार्नु ठीक हो । सबैभन्दा पहिले यो कुरा परीवारले बुझ्नु पर्यो । अनि समाजले छोरीलाई दोस्रो दर्जामा हेर्नु भएन । राज्यले पैसा र पावरको आडमा छोरीमाथी दमन गरोस् । अपराध गर्ने अपराधीको अगाडी न्याय नझुकोस् । ता की भोली फेरी कुनै निर्मलाको अपराधी पत्ता नलागेर छोरीहरू आफूलाई असुरक्षित नठानुन् । कुनै मनिषाले दाइजोको तराजुमा जोखिन नपरोस् । कुनै शवनमले गरीवी र कथित जातीय बिभेदका कारण अकालमा मर्नु नपरोस् । साथीको अबिश्वास गर्नु नपरोस् । परीवार ,समाज र देशैभरी सुरक्षित महसुस गरेर खुला आकाशमा हिंड्न पाउन् । अनि हरेक बाबाआमाले भनुन् हाम्री छोरी हाम्रो आशा र भरोसा, हाम्रो गौरव ।